Fototry ny fanantenana amin’ny Fitoriana ny Evanjely amin’ny fomba vaovao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
KONGRESY FAHATELON’I AFRIKA SY MADAGASIKARA MOMBA NY FAMINDRAM-PON’ANDRIAMANITRA
Ny famindram-pon’Andriamanitra : Fototry ny fanantenana amin’ny Fitoriana ny Evanjely amin’ny fomba vaovao
Ny Kongresy fahatelon’i Afrika sy Madagasikara momba ny Famindram-pon’Andriamanitra dia natao tao Kigali renivohitr’i Rwanda tamin’ny 9 hatramin’ny15 septambre 2016
Ao anatin’i Afrika no ahitana an’i Rwanda. Manana velarana 26.300 Km², ahitana mponina 12.600.000, miteny amin’ny tenim-pirenena tokana, kinyarwanda. Tanàna be havoana I Kigali, ary antsoina hoe: “la ville aux mille collines” ary mampitolagaga amin’ny fahadiovany, sy ny fanajariana tanàna voarindra manaraka ny toetr’andro, ka tena mahafinaritra. Tsy misy sachet plastique na fako miangona, tsy misy mpangataka an-dalambe na mpanendaka eny fa na alika mirenireny aza dia tsy misy.
Arsidiosezy tokana sy diosezy valo no mandrafitra ny Eglizy katolika ao Rwanda. Araka ny antonan’isa tamin’ny 2009 dia ahitana paroasymiisa 161, pretra733, relijiozy lehilahy198, relijiozy vehivavy1600, 4 293 000 ny katolika raha 9 900 000 ny mponina.
Ny Rwandais dia vahoaka nifamono sy nifandripaka tamin’ny alalan’ny ady an-trano (génocide) tamin’ny avrily ka hatramin’ny jolay 1994. Eo amin’ny 800 000 lahy sy vavy ary ankizy no maty tao anatin’ny fotoana fohy. Maro ny antony nahatonga izany fa indrindra ny fitambaran’ny fankahalàna sy fialonana teo amin’ny foko Tutsi sy Hutu nandritra ny taona maro. Kanefa ny marina dia avy amin’ny foko iray ihany no nihavian’izy ireo. Tany ho any amin’ny taona 1800 dia nametraka fanavahana ny mpanjana-tany, ka ny Tutsis dia ireo mpiompy manana omby mihoatra ny folo, ary ny Hutu kosa dia ireo mpamboly manana omby latsaky ny folo. Nosoratana tao amin’ny pasipaoron’ny tsirairay izany sokajy izany ka nifandovan’ny taranaka. Teo amin’ny faran’ny taona 1950, dia maro tamin’ireo avara-pianarana rwandais no nankato ny fisian’izany sokajy izany teo amin’ny fiarahamonina misy azy ireo ka ny Tutsis dia ireo mivoatra kokoa ary ny Hutus dia sokajy natao hanaraka baiko fotsiny, ka nitarika fahasorenana lalina sy lonilony tamin’ireo farany izany.
Tao anatin’ny 20 taona taorian’izany genocide izany, dia nianatra niara-niaina ny Rwandais rehetra. Nofoanan’ny fitondrana tao anaty karapanondro ny anarana foko. Nampidirina tao anatin’ny fiarahamonina ny asa tana-maro fampivoarana: fanamboarana lalana, fanamboarana trano, fanadiovana ny tanàna sy ny tonolo iainana ary izany tsy nanavahana sokajin’olona ara-tsosialy fa nandraisan’ny olona rehetra anjara. Nomena ny fahamendrehany ny vehivavy ary mitana toerana lehibe eo anivon’ny fiarahamonina, eny fa eo amin’ny sehatry ny fandraharahana sy ny fitondram-panjakana. Na dia misy fiantraikany tamin’ny fiainan’ny tsirairay aza izany fifamonoana faobe izany dia samy mijery ny hoavy sy izay hampivoarana ny toe-kareny izy ireo. Ankehitriny, na dia eo aza ny fery anaty sy ny takaitra eo amin’ny vatany, dia mirehareha noho ny maha izy azy izy ireo: olona niova fo, feno ainga vao ary nentanin’ny finoana, ka afaka nifamela, afaka ny nihavana tamin’izy samy izy, sy tamin’Andriamanitra.
Tsara ho fantatra fa io famonoana faobe io dia tsy nijanona teo ivelan’ny Eglizy fa tafiditra hatrany anatin’ny tranon-drelijiozy: Tena asan’ny ratsy mihitsy.
Masina Maria dia niseho tamin’ny tanora zazavavy telo tao amin’ny Kolejy tao Kibeho, tanàna kely teo amin’ny 153km miala an’i Kigaly, teo anelanelan’ny 28 novembra 1981 hatramin’ny 28 novembra 1989. Nampahafantatra ny tenany izy ka nilaza fa: “Izaho no Renin’ny Teny”. Nampita hafatra tamin’izy ireo i Masina Maria ka toy izao ny ampahany: “Na dia eo aza ny loza mitatao aminareo, dia matokia anaka fa tsy misy ambony noho Andriamanitra. Ankoatr’izay, ny loza dia mety hiseho amin’ny toerana rehetra. Ny zava-dehibe dia ny hiatrehana azy tsy am-pitarainana, ampahanginana. Anaka, mivavaha, mibebaha ianareo!” Ny hafatra dia tsy natokana ho an’i Rwanda irery ihany fa ho an’izao tontolo izao. Koa azo ampiharina amin’ny firenena rehetra izao ampahany nambara izao, izay avy amin’ny Renintsika avy any an-danitra. Ny Rwandais dia mijoro vavolombelona tamin’ ny zavatra niainan’izy ireo, mba tsy hisy intsony olona na firenena ho tratry ny fandriky ny ratsy toy izao intsony. Tsapa fa be loatra ny fangirifiriana sy fahoriana nisy hany ka tsy mahaloa-peo ny tena! Noharian’Andriamanitra isika , nataony mitovy endrika Aminy, mifanahaka Aminy, nefa zary tsy hita izany.
Ho anay nanatrika ny Kongresy, lahika 524 avy amin’ny firenena 21 no tonga tao Kigali. Olona dimy no nandray anjara tao amin’ny delegasiona Malagasy, notarihin’i Monsenera Georges Varkey, Evekan’i Port-Bergé, niaraka tamin’ny pretra telo sy lahika iray. Notsenain’ireo mpampiantrano rwandais tamin-kafaliana sy tamim-pitiavana izahay. Noraisin’izy ireo an-tanana ny momba anay rehetra ary tsy nandao anay izy ireo nandritra ny fitsidihanay, ka nikarakara hatramin’ireo zava-madinika indrindra. Nampiantranoina tamin’ireo ivontoerana maromaro fandraisana vahinin’ny relijiozy izahay. Ireo Kardinaly 3 sy ireo Eveka 22 nanatrika ny Kongresy moa dia nipetraka tao amin’ny toerana voatokana ho azy ireo irery. Ny fitaterana hatrany amin’ny Toerana masina, Sanctuaire de la Miséricorde Divine izay tany amin’ny roapolo kilaometatra, dia notanterahin’ny fiarabe mpitatitra efa voatokana ho anay. Ny tontolo andronay dia feno tokoa: ka tao ny lahateny, ny Eokaristia, ny Sakramentan’ny Fampihavanana, ny vavaka sy fanajana ny oran’ny fampindram-pon’Andriamanitra ary tao koa ny raharaha hafa. Nefa dia niara nientam-po izahay rehetra, mahatsapa tena ho iray, aina iray, toy ny olona mifankahalala tsara, na dia mbola tsy nihaona mihitsy aza. Tsy nisy fotoana nahatsapanay hoe vahiny izahay. Samy nizara an-kitsipo ny traikefa nananany tany amin’ny taniny avy, tany amin’ny paroasiny avy. Ka dia tsapanay fa mitovy ny olana sedrain’ny tsirairay, isam-pirenena, eo amin’ny asa fanapariahana ny fampahafantarana ny Famindram-pon’Andriamanitra. Nampahalalanay ireo raiamandrenin’ny Fiangonana izany olana izany ka feno hafaliana ny fonay rehefa nahazo ny tso-dranon’ny Eglizy masina mba ho iraka mahatoky, hiara-miasa amin’i Jesoa ho famonjena fanahy maro, nandritra ny Sorona Masina famaranana ny Kongresy.
Niaina ny fotoana tena nanamarika indrindra ny fiainanay tokoa izahay. Manoloana ny firotsahanay amin’ny asan’ny Eglizy dia tsapa fa mazava izay rehetra tian’ireo Ray aman-drenin’ny Fiangonana navoitra tamin’ity Kongresy ity. Ireo lahateny nataon’ny raiamandrenin’ny Fiangonana sy ny mpampianatra mpikaroka ary koa ny fijoroana vavolombelona dia tafalatsaka sy nanokatra ny fonay ka nanampy anay hahatsapa ny zava-misy sy ny tontolo iainantsika ankehitriny, bebe kokoa.
Araka izany, noho ny fanatontoloana, dia tandindomin-doza lehibe izao tontolo izao satria tsy heverina intsony ny maha olona, atao toy ny tsy misy Andriamanitra, ka miantomboka ao amin’ny fianakaviana, izay andrin’ny fivoarana sy fahombiazana ara-tsosialy ao amin’ny firenena, ary indrindra fototry ny Eglizy. Misy fomba amam-panao ratsy tafiditra ao amin’ny fiainantsika andavanandro izay tsy tandrintsika akory ny fisiany. Tsikelikely, zary fahazarana ny tsy fisian’ny fanajana sy fahendrena ka heverina ho ara-dalàna. Ny zavatra tsy mety dia lasa ekena hoe mety. Ary ankehitriny, ny ady lehibe fahatelo dia efa nanomboka fa mitsitokotoko manerana an’izao tontolo izao…
Na eo aza izany, aty Afrika sy Madagasikara dia mbola misy fanantenana na dia maro ny ezaka ilaina tratrarina: mbola velona ny soatoavina ara-moraly, miahy ny maha-olona, ny lanjan’ny fianakaviana sy ny kolontsaina izay mitoetra eo amin’ny fiaraha-monina. I Afrika sy Madagasikara dia tokony hanaiky ny hiara-miasa amin’Andriamanitra, ary hatoky Azy mba hamerenana ny hasin’ny maha-olona eo amin’izao tontolo izao. Ny Fiangonana aty Afrika sy Madagasikara no ho avin’ny Fiangonana maneran-tany. Ny Fanahy Masina dia miasa mba hanampy antsika hanamafy ny finoantsika sy ny fahatokisantsika ny Famindram-pon’Andriamanitra izay tsy hita pesipesenina. Ary satria isika vita batemy, nirahin’ny Eglizy mba hitory ny Evanjely, hijoro vavolombelon’ny fitiavan’Andriamanitra sy hampiely ny Famindram-pon’Andriamanitra eo manodidina antsika amin’ny alalan’ny asa Famindram-po ara-nofo sy ara-panahy. Noho izany dia mitsangana isika mandeha manara-dia an’I Mb Faustine sy ny Papa Joany Paoly II. Hoy I Jesoa tamin’I Mb Faustine: “Faniriako ny hanavotra ny fanahy maro, ampio Aho anaka amin’ny fanavotana ny fanahy rehetra (PJ.1032). Toy inona ny faniriako hamonjy ny fanahy rehetra… Tiako ny manome ny aiko masina ho ao anatin’ny fanahin’ny olona rehetra ary hanamasina azy, indrindra fa raha eken’izy ireo ny fahasoavako. Ireo mpanota fadiranovana dia ho tonga amin’ny fahamasinana avo indrindra raha matoky ny Famindram-poko (PJ.1784). Anaka, atolory Ahy ny fanahy rehetra; fantaro fa adidinao ny mitondra ho Ahy ny fanahy rehetra amin’ny alalan’ny vavaka sy fampijalian-tena ary ny fampirisihana hatoky ny Famindram-poko (PJ.1690)” Maniry hampiely ny fiainako amin’ny maha-Andriamanitra ao amin’ny fanahin’ny olombelona sy ny hanamasina azy Aho, raha mba maniry fotsiny izy ireo ka manaiky ny fahasoavako. Ny mpanota be dia mety ho tonga amin’ny fahamasinana, raha toa ka mahatoky ny Famindram-poko”.
Tamin’ny teny frantsay, anglisy, swahili, kinyarwanda, sy malagasy dia nanandratra vavaka tamin’ny feo iray izahay niara-nanonona ny sapilen’ny Famindram-pon’Andriamanitra izay nofaranana tamin’ny tenim-pirenenay avy hoe: “Jesoa matoky anao aho!”
Nentanin’ny hafaliana sy ny fitiavana izahay, mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin’ny Eglizy katolika, no nanolo-tena ho azy, mba handroso lalindalina kokoa ho amin’ny fitoriana amin’ny fomba vaovao ny Evanjely ho voninahitr’Andriamanitra sy ny Fiangonana izay tena mampirehareha anay. Mazava tsara fa mila ny firotsahana an-tsehatry ny lahika bebe kokoa ao amin’ny fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra ny Fiangonana, miaraka amin’ireo pretra sy relijiozy, ampian’ny fitantanan’i Masina Maria Virjiny, Renin’ny Teny.
Natao teto Antananarivo ny 10 Novambra 2016
Mme Joëlle BEDO
Secrétaire de la Commission Episcopale pour la Nouvelle Evangélisation